के हो अमेरिकी इण्डोप्यासिफिक रणनीति ? – Lokpati.com
मृत्यु नेपाल प्रहरी पक्राउ चितवन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड अमेरिका राशिफल नेकपा केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सरकार प्रचण्ड नेपाली काँग्रेस प्रधानमन्त्री अपराध
के हो अमेरिकी इण्डोप्यासिफिक रणनीति ?
काठमाडौं। अमेरिकाको दक्षिण एसियामा प्रभुत्व बिस्तार गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारिएको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे नेपालमा बहस सुरु भएको छ। सुरुमा एसिया प्यासिफिकको रुपमा चिनिँदै आएको यस क्षेत्रलाई सन् २०१७ बाट इण्डो प्यासिफिकको रुपमा चिनिँदै आएको छ।
अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्म अर्थतन्त्र, प्रशासन र सुरक्षालाई समेट्छ। अमेरिकाको काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका अनुसार इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिले भारतलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ। एसिया क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई रोक्न भारतलाई अगाडि सार्दै अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिलाई बिस्तार गरिरहेको छ। यही अनुरुप अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका चीनको प्रभावमा रहेका मुलुकहरु आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै गएको छ।
अमेरिकामा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली र अमेरिकी समकक्षी पोम्पिओसँगको भेटपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको वक्तव्यमा ‘इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र’मा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुन सक्ने विषयमा छलफल भएको उल्लेख थियो। यसले परराष्ट्रमन्त्रीको आलोचना भयो। उनले स्पष्टिकरण दिए, इन्डो प्यासिफिक ‘रिजन’ हो ‘स्टाटेजी’ होइन भन्दै। तर, उनको स्पष्टिकरणले अमेरिकाको स्वार्थ भने बदलिने होइन।
अमेरिकी सेनाको युनिफाइड कम्ब्याटेन्ट कमाण्ड हो इण्डो प्यासिफिक कमाण्ड। यो इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रप्रति उत्तरदायी छ। यो अमेरिकी सेनाको पूरानो र ठूलो युनिफाइड कमाण्ड हो। सन् १९४७ जनवरी १ मा निर्माण भएको यो कमाण्ड सुरुमा युसएस प्यासिफिक कमाण्डको रुपमा चिनिन्थ्यो। सन् २०१८ मे ३० मा यसको नाम युएस इण्डो प्यासिफिक कमाण्ड राखियो।
यो कमाण्डको कमाण्डरले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको २६ करोड वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा सैन्य अपरेसन चलाउने अधिकारी र उत्तरदायित्व राख्छ, जुन पूरै पृथ्वीको करिब ५२ प्रतिशत क्षेत्र हो। यसले अमेरिकाको पश्चिमी सामुद्रिक तटदेखि भारतीय सामुद्रिक तट हुँदै पूरा आर्टिक र अन्टार्टिक क्षेत्र घेर्छ। यसको सोझै रक्षामन्त्रीमार्फत् अमेरिकी राष्ट्रपतिसमक्ष रिपोर्ट गर्छ।
यसको मुख्यालय हवाइमा रहेको छ। हवाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको पचासौं राज्य हो जुन उत्तर अमेरिकाबाट बाहिर छ। अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्न इण्डोप्यासफिकको रणनीति अघि सारेपछि नेपाली जनमत भने झस्किएको छ। सत्तारुढ नेकपाभित्र पनि यसबारे पेचिलाे बहस सुरु भएकाे छ।
खनालको पदावधि सकिँदै : नयाँ आइजीपीका दावेदार को–को ?
महतोलाई किचेर मार्ने टिपर चालक पक्राउ